I-China Soft PVC Coasters mveliso kunye nabenzi | SJJ
Sebenzisa ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo ukukhusela itafile yakho kunye nedesika kunye nekomityi. Oku kwenza ukuba ubomi bakho bube mnandi kwaye bunencasa. Ii-coasters zihlala zisetyenziswa kwimivalo, kwiibhendi, kwiintsapho kunye namaqela. Sisoloko sisenza ii-Coasters nge-Soft PVC, i-silicone, i-Metal, ukhuni okanye ukhetho lwephepha. Ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo zi ...
Sebenzisa ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo ukukhusela itafile yakho kunye nedesika kunye nekomityi. Oku kwenza ukuba ubomi bakho bube mnandi kwaye bunencasa. Ii-coasters zihlala zisetyenziswa kwimivalo, kwii-Banquets, kwiintsapho kunye namaqela. Sisoloko sisenza ii-Coasters nge-Soft PVC, i-silicone, i-Metal, ukhuni okanye ukhetho lwephepha. Ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo zezona zidume kakhulu ngenxa yento echasene namanzi. Ukubamba indebe, iglasi, okanye imagi enamanzi, ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo zinokuthintela ukuba zimanzi kwaye zaphule ngexesha elifutshane. Ngezinto eziguqukayo zeSoftware yePVC, ii-Coasters eziPholileyo ze-PVC aziyi kuqhekeka kwimeko yokuba i-coasters yehla ezantsi etafileni okanye edesikeni. Ii-Coasters ze-PVC ezithambileyo zikulungele ukubeka iilogo zakho ezimibalabala ngaphambili okanye ngasemva, nge-embossed, idosiweyo, umbala ugcwalisiwe, ushicilelweyo okanye inkqubo yobuchwephesha. Ii-Coasters ezithambileyo ze-PVC zinokuba luyilo olunye, iziqwenga ezi-2, iziqwenga ezi-3 okanye nabuphi na ubungakanani beseti nganye yokupakisha.
Ii-Coasters ezithambileyo ze-PVC zitshiphu ngomgangatho ophezulu, imibala enemibala, kunye noyilo olucacileyo, zilungile kakhulu ukunyusa okanye izikhumbuzo zokugcina ixesha elide. Iimilo eziqhelekileyo zeSoft PVC Coasters zisangqa okanye isikwere, ubungakanani malunga ne-80 ~ 100 mm, kodwa iimilo kunye nobungakanani obucelayo zihlala zifumaneka ngenani elincinci lokusetha. Ii-Coasters zethu zeSoftware zeSoftware zenziwe ngobuhlobo kunye nokusingqongileyo ngezinto ezithambileyo zePVC, zinokubonelelwa ngexesha elifutshane ngamaxabiso afanelekileyo kunye nomgangatho ngokunjalo.
Iimpawu: I-Die Struck, i-2D okanye i-3D, amacala angatshatanga okanye aphindwe kabini
Imibala: Umbala ongasemva ungangqamana nombala wePMS
Ukugqiba: Zonke iintlobo zeemilo, iiLogo zinokuprintwa, zibhalwe, i-Laser ikrolwe njalo njalo
Ukhetho oluQhotyoshelweyo oluqhelekileyo: Akukho siqhotyoshelweyo okanye senziwe ngokwezifiso
Egqithileyo Ifayibha yeSoftware yePVC
Okulandelayo: Iimpawu zeMpahla ye-PVC ethambileyo
Ukutyibilika Izikhonkwane Ukuhamba
Iingqekembe zeMpembelelo zeMirror okanye iMint Proins Coins